Al-Shabaab oo Dagaal waali ah ku qaaday Gudaha Kenya iyo Khasaare ay sheegeen inay gaarsiiyeen Ciidamada Kenya. – Balcad.com Teyteyleey
Al-Shabaab oo Dagaal waali ah ku qaaday Gudaha Kenya iyo Khasaare ay sheegeen inay gaarsiiyeen Ciidamada Kenya.
By Maxamed Axmed Xasan	 On Jun 3, 2017
Cabdi Caiis Abuu Muscab Afayeenka dhinaca hoowlagaladda Al-Shabaab ayaa sheeg inay Weerareen dalka Kenya Todobaadyadii u dambeeyay, wuxuuna sheegay inay ku guuleeysteen howlgalada ay Kenya ka fuliyeen.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa waraysi uu siiyay Idaacadaha ku hadla Afka Al-Shabaab ku sheegay inay qaadeen 11 weerar Arbacadii iyo khamiistii oo klaiya ayna weerareen ciidadammo Kenyan ah, wuxuuna sheegay inay dileen ilaa iyo 30 ka tirsan ciidamadda Kenya, islamarkaana ay gubeen gaadiid Dagaaal.
Shabaabka oo maalmihii la soo dhaafay tababar u soo xiray Ciidamo, markii ay Al-Shabaab Tababarkaasi u soo gaba gabeeyeen Ciidamadooda waxaaa laba jibaaarmay Weradda Al-Shabaab ay ka fulinayaan Kenya.
Dhanka kale Todobaadkii la soo dhaafay waxaaa gobolka woqooyi bari Kenya ka dhacay Qaraxyo ka dhashay miinooyin dhulka lagu aasay oo Waxyeelo gaarsiiyay Ciimo Booliis ah, waxaa sidoo kale Weerarro isla Gobolka ka dhacay ay Al-Shabaab ku soo Afduubteen Mucalimiin iyagoo gubay iskuulkii ay Mucalimiintu dhigayeen.
The post Al-Shabaab oo Dagaal waali ah ku qaaday Gudaha Kenya iyo Khasaare ay sheegeen inay gaarsiiyeen Ciidamada Kenya. appeared first on Ilwareed Online.
Faallo: Askerinnimo abaal ma leh!
Xildhibaano sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda Gobolka Banaadir uu lahaa.